by MotioJul 16, 2021Cognos Analytics, Cognos Performance, Cognos Troubleshooting, ReportCard0 mashoko
Ngatitemei kumhanya. Cognos performance ndechimwe chinhu chausingafunge nezvacho kusvikira zvanyanyisa. Isu takaongorora vashandisi veBM Cognos Analytics nezve maitiro avo ekuita uye tikanyora zvakawanikwa mune infographic. Izvi ndizvo zvatakawana:
Iwe haufanire kunge uri mune vazhinji vevatori vechikamu vasina hurongwa munzvimbo. Motio iri kumhanyisa akateedzana eCognos Performance Optimization mashopu akagadzirirwa kutenderedza kukubatsira iwe kuwana ruzivo rwekuchengetedza mushe, mushe unomhanya sisitimu.
Iyi musangano ichave nemaoko-pamarabhabha uye mharidzo neIBM. Uchaenda uine ruzivo ku:
Kurumidza kunongedza nyaya dzekuita kuburikidza nekutarisa zviitiko munzvimbo yako yeCognos.
Nzwisisa chinokonzera nyaya yacho uchishandisa chaiyo-nguva chenjedzo isati yakanganisa vashandisi vekupedzisira.
Gadzira dashboard & mushumo dhizaini yakanangana nekuendesa analytics padanho repamusoro rinogoneka.
Tichagovana zvakanakisa maitiro uye matipi & matipi eakawanda akagadziridzwa IBM Cognos Analytics kuita. Hazvina mhosva kuti uripi murwendo rwako rweCognos, musangano uyu une chimwe chinhu kwauri.
Musangano unotevera ndiGumiguru 28- Nyoresa iyo Workshop